Taariikhda Degmada Cadale - Cadale.com waxaan rabaa
Taariikhda Degmada Cadale
Cadale (Af-Ingiriis: Adale) waa degmo dhacda koonfurta (Shabeellaha Dhexe) Soomaaliya. Sidoo kale waxay dhacdaa Badweynta Hindiya ee Loolka 2° 45' 35.61" 0N iyo Dhigta ah 46° 19' 22.01" 0E. Magaaladaan waxay hoosyimada Degmada Cadale (Af-Soomaali: Cadale).
waa degmo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe, waxay ku taalaa Xeebta Badweynta Hindiya, waxayna Muqdisho dhinaca Waqooyi uga beegan tahay ilaa 180Km. Waxaa ku badan qabiilka la yiraahdo cabdalle caroone sidoo kale waxaa wax ka degan qabiilka la yiraahdo Celi Cumar Oo Ka degan dhul xeebeedka degmada cadale labada dhinac kajira iyo tuulooyin badan oo ey kamid tahay tuulada
koogaar kuna leh magalada Cadale dhaxdeeda ganacsi iyo odayaal dhaqameedyo cadale waxay ka mid tahay degmooyinka caanka ka ah Xeebaha Soomaaliya, waxayna aas'aasantay xilli hore oo aan si sax ah taariikhdeeda loo hayn. Magaca ay leedahay degmadani ee Cadale wuxuu iska saaran yahay labo eray oo gaagaaban, iyadoo midka hore yahay Caday iyo Leh, waxaana loo jeedaa goob Caday leh oo ay ka buuxaan geedaha lagu rumeysto. Cadale ka hor intii aan la aasaasin waxay ahayd goob ay ku yaalaan teendhooyin yar yar oo ay leeyihiin dadka Kalluumeysato ah oo ka shaqeysan jiray Xeebaha ku dhow dhow degmada Cadale. Cadale waxay caasimad u ahaan jirtay dadka ku nool deegaanada ku dhow dhow maadaama ay ahayd magaalo weyn tan iyaga ugu dhow. Sanadkii 1307 ee Hijriyada ayaa waxaa deegaanadaas ciidamadii Talyaaniga ee gumeystaha kula dagaalamay dadka deegaanka oo uu hogaaminayay Sheekh Axmed Sheekh Abiikar Xasan (Sh. Axmed Wacdiyow), , inkastoo haddana jabhad halkaas laga aas aasay oo ka horjeedday Talyaaniga aysan muddo dheer shaqeyn oo ay mar dambe burburtay. Degmada Cadale waxay horey u ahaan jirtay magaalo ay deggan yihiin waddaado fara badan, iyadoo ka mid ah magaalooyinkii ugu masaajidyada badnaa xilliyadii hore. Dadka deegaankaasi deganaan jiray waxaa ka mid ahaa Cali Hagareey iyo Avv.Maxamed Sh.Maxamud Gebyow oo Ahaa Maskaxdii ka danbeysay Dastuurkii 60kii iyo sidoo kale waxaa kasoo jeeday wasiirkii arrimaha gudaha ee xukuumadii 60kii Kutubo xoor iyo weliba saraakiil fara badan oo ciidanka qalabka  ka tirsan oo laga xusi karo Sareeye Guuto Axmed Maxamud Cadde Qoorweyne oo ka mid ahaa shantii golaha sare ee kacaanka ahaana governerkii gobolka banadir iyo mayorkii magaalada muqdisho 70tameeyadii haddii aan dib ugu noqdo Sheekh Axmed Sheekh Abiikar Xasan (Sh. Axmed Wacdiyow), wuxuu Sheekhaasi ahaa wadaad aad uga soo horjeeday imaanshihii Talyaaniga ee dalka Soomaaliya, wuxuuna isku dayey in uu si awood ah uga hortago gumeystihii Talyaaniga. Sheekh Axmed Wacdiyow oo reer Cadale ahaa waxaa jira Gabayo fara badan oo uu ka tiriyey gumeystihii Talyaaniga iyo sida uu uga soo horjeedday, waxaana ka mid ahaa gabayadiisii:
Cadale waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Sh/dhexe, iyadoo hore uga mid aheyd degmooyinkii laga soo gooyey Gobolkii Benadir. Cadale waa degmo uu alle ku maneystay kheyraad fara badan sida xoolaha iyo kalluunka waxaa kale oo ay degmadu leedahay dhul beereed kooban, waxaa kale oo ay leedahay deegaan ballaaran oo aad ugu haboon dalxiiska ka sokow xoolaha aynu dhaqano waxaa ay degmadu hodan ku tahay noocyo badan oo ugaarta ka mid ah sida deerada ama damba cada oo aad u buuxdo deexda cadale.
Degmada waxaa Hoos yimaada Tuulooyinka kala ah, (Maxaa Saciid) , xaaji cali, Cadow uul, bursho shiiq, Ceelmuluq, Masaajid Cali gaduud, Geelgub, Koogaar, iyo kuwo kale oo badan